सुहाना भन्छिन् अनमोलसंगको केमेस्ट्री मन पराइ दिनु भयो | "हरेक घरमा धारो होस्, हरेक गाउँमा सिंचाइ होस्"
सुहाना भन्छिन् अनमोलसंगको केमेस्ट्री मन पराइ दिनु भयो
May 30, 2019 by एस.डि.अर्पण
३१ मे, वार्सवा। नेपाली चलचित्रको ईतिहासदेखि वर्तमानसम्म आइपुग्दा विभिन्न उतारचढाव पार गर्यो। परिस्थितिलाई नियाल्दै बनेका फिल्म सफल पनि भए भने क्षणिक रङ्गमन्च सृजना गर्ने फिल्म सायद दर्शकको अन्तरमनमा सामिप्य हुन सकेनन्।नेपाली सिनेजगतलाई रास्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चिनाउन केही कलाकारले अतुलनीय योगदान पुर्याएका छन् जुन हरेक नेपालीका लागि स्मरणीय साथै गौरवपुर्ण रहेको छ। समय र प्रविधिको विकाससंगै नेपाली फिल्म उद्योगले पनि अनेकन खुड्किलाहरु पार गर्दै विकासको गति लिएको छ । बहु -संख्यात्मक रुपमा उत्पादित फिल्म सफलताको रेखांकनमा जोडघटाउ गर्ने हो भने निकै न्यून रहेको देखिन्छ तर सदाबहार नेपाली फिल्म नगरिमा उत्कृष्ट अभिनय मार्फत नेपाली दर्शकको माझमा रङ्गिन छाप छोड्न सफल कलाकारको नाम पर्दापण गर्दा झरना थापाको नाम अब्बल दर्जामा आउँछ। सुख-दुःख, मुग्लान, ए मेरो हजुर देखि ए मेरो हजुर ३ सम्म आइपुग्दा दर्जनौ हिट फिल्महरु आम नेपाली दर्शक माझ पस्किसकेकी छन्।उनको अभिनयको कला,माधुर्यता एवं निखारताले दर्शक हरेक पटक पर्दामा झुमेको देखिन्छ। पछिल्लोपटक उनले निर्माण र निर्देशन गरेको फिल्ममा उनकी छोरी सुहानाथापाने ले पनि नवनायिकाको रुपमा डेब्यु गरिन। पहिलो अभिनयनै उनका लागि फलिफाप साबित भयो किनकी लाखौ दर्शक उनको अभिनयमा मन्त्रमुग्ध भए। अर्कोतर्फ झरना थापाको उत्कृष्ट निर्देशनले फिल्ममा निखारता ल्यायो जहाँ निर्देशनको पाटो पनि अब्बल रहयो। निर्देशक र नायिका थापा द्वोय फिल्म प्रदर्शनको क्रममा युरोप भ्रमणमा छन्। त्यही क्रममा उनिहरु अहिले पोल्याण्ड आइपुगेका छन्। खासगरी फिल्म प्रदर्शनका सन्दर्भमा युरोपका दर्शकको कस्तो प्रतिक्रिया रहयो र फिल्मले विशेषगरि के सन्देश दिन खोजेको भन्ने सन्दर्भमा पोल्याण्ड नेपालका कलश खरेलले विशेष कुराकानी गरेका थिए।उक्त सम्पादित संवाद तपाँईहरु माझ प्रस्तुत गरेका छौँ।
प्रश्न: झरना जि यो त अनौठो भयो नि । सुरुवातमै तपाईले निर्देशन गरेको फिल्म ए मेरो हजुर ३ सुपर हिट भयो ।खास यस्को राज के छ?
जवाफ: खासगरी म नेपाली फिल्म नगरिमा नौलो त पक्कै हैन।२ दशक भन्दा बडि समयदेखी म यो क्षेत्रमा कृयाशिल छु । यो केबल दर्शक श्रोताहरुको अभुतपुर्व मायाले सम्भव भएको हो। म अत्यन्त उत्साही छु। मैले पनि आफुमा भएको अनुभव र दक्षतालाई हरसम्भव यो फिल्ममा उतार्ने भरमजदुर प्रयास गरेको छु। सुरुवातमै मैले अभिनित गरेको फिल्म ए मेरो हजुर अति नै चर्चामा रह्यो । त्यस्तै दोस्रो फिल्म ए मेरो हजुर २ पनि उत्तिकै राम्रो भयो। ए मेरो हजुर ३ सम्म आउदा नामको प्रभाव सकारात्मक रह्यो भने अर्को तर मेरो छोरी सुहाना थापाले पहिलोपटक अभिनय गरेको फिल्म कस्तो रहेछ भन्ने आम दर्शकमाझ कौतुहुलता थियो। यिनै पक्षले भुमिका खेले जस्तो लाग्छ।
प्रश्न: तपाईं बिगतमा नायिका भएर अभिनय गरेको व्यक्ति एकाएक आफैले निर्देशन गरेर फिल्म निर्माण गर्दा खास के फरक पाउनु भयो?
जवाफ: फरक त धेरै कुरामा हुदो रहेछ।एउटा कलाकार भएर अभिनय गर्दा सिमित काममा मात्र ध्यान दिए पुग्थ्यो तर निर्देशनको पाटो सम्हाल्दा चारैतिर ध्यान दिनु पर्ने रहेछ। सम्पुर्ण समुहमा रहेका व्यक्तिको खाना खाने देखि लिएर भिन्न बिधामा रहेका व्यक्तिको काम नजिकबाट नियाल्नु पर्दो रहेछ। कथा अनुसार कलाकारलाई कसरी अभिनय गराउने र ठाउँको छनोट कसरी गर्ने लगायतका विषयमा चनाखो पुर्वक सतर्क हुनु पर्ने अवस्था हुँदो रहेछ।यस्तै-यस्तै विषयमा व्यापक भिन्नता पाए।
प्रश्न: फिल्म हिट भएपछी त अर्को फिल्म लागि चुनौती त थपियो नि ?
जवाफ: पक्कै पनि उत्साह सङ्गै चुनौती पनि थपिएको छ।यो भन्दा अर्को फिल्म कसरि गुणस्तरीय बनाउने र दर्शकलाइ थप रोमान्चित कसरी बनाउने भन्ने तर्फनै हामिले सोचेका छौ। अबको फिल्म पनि दर्शकको अपेक्षा अनुसार निर्माण गर्नेतर्फनै हाम्रो प्रयास कसिलो हुनेछ। यो फिल्मले पनि अर्को निर्माणको लागि थप उर्जा थपेको छ।
प्रश्न: झरना जि अनमोल र सुहानालाई नै यो फिल्ममा लिनुको कारण के थियो?
ज्वाफा: खासगरी मैले सुरुवातमा अनमोललाई नै यहि फिल्ममा खेलाउछु भन्ने थिएन। कुराकानी गर्ने क्रममा सुहाना र अनमोलको सम्योजन प्रभावकारी हुन्छ भन्ने लाग्यो तदअनुरुपनै निर्णय लिएका हौ।
प्रश्न: युरोपमा फिल्म प्रदशन हुँदा दर्शकको कस्तो प्रतिकृया पाउनु भयो?
जवाफ: हामी हलमा जाँदा जसरी दर्शकको घुइचो देखौ। यो अपार मायाले हामी निकै उत्साही भएका छौ। वि देशमा बसेर आफ्नो माटो,संस्कृतिलाई जिबन्त राख्ने अभियानमा सकृय हुँदा नेपाली दाजुभाई-दिदिबहिनी प्रति गर्व लाग्छ।यो भावना सदैब रहनेछ भन्ने सन्दर्भमा हामी पुर्ण विस्वस्त छौ।
प्रश्न: अन्त्यमा तपाइहरु दुबै जना के भन्न चाहानु हुन्छ?
जवाफ: हाम्रा केही भनाइहरु सम्प्रेषण गर्ने अवसर प्रदान गर्नुभएको अवसरमा बिशेषगरी पोल्याण्ड नेपाल अनलाइन खबरलाई अन्तरमन देखी धन्यवाद दिन चाहान्छौ। पछिल्ला दिनहरुमा दर्शकको नेपाली फिल्म प्रतिको लगाव र चिन्तनशिलता वृद्धि भएको छ। यो अत्यन्त गौरवपुर्ण क्षण हो।नेपाली फिल्मलाई माया गर्नु नै नेपाली कला, संस्कृती र परम्परालाई प्रेम गर्नु हो तसर्थ नेपाली फिल्मको प्रगतिको लागि सदैब आम नेपाली दर्शकहरुले साथ-हौसला प्रदान गर्नेमा हामी पुर्ण विस्वस्त छौ।आगामी दिनमा पनि हामिले उत्कृष्ट फिल्म निर्माणका लागि थप मेहेनत गर्ने छौ।
प्रश्न: सुहाना जि पहिलो डेब्यु फिल्मनै चर्चाको शिखरमा पुग्छ भन्ने कुनै दिन कल्पना गर्नु भएको थियो?
जवाफ: मैले त्यति गहिराइमा पुगेर फिल्म चर्चाको शिखरमै पुग्ला भनेर कल्पना गरेको त थिएन। यद्यपी मेरो अभिनयलाई दर्शक-श्रोताहरुले खुलेर मन पराउनु भएको छ जुन मेरा लागि प्रेणाको श्रोत बनेको छ।
प्रश्न: तपाईले यो फिल्ममा कस्तो भुमिका निर्वाह गर्नु भएको छ?
जवाफ: मैले एउटा भर्खरै अध्ययन गर्दै गरेको विद्यार्थीको जीवन सहज रुपमा अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने सिद्धान्तमा आधारित रहेर भुमिका निर्बाह गरेकि छु। धेरै अपेक्षा नराखी सहयोगको भावलाई पनि जोड दिइएको छ। अर्को तर्फ दृण स्वभाव र कहि- कहि घमण्डि जस्तो पनि देखिएको छ तर कामको लागि अडिग भनेर सन्देश दिन खोजिएको छ।
प्रश्न: तपाँई अहिले चर्चाको शिखरमा हुनुन्छ। यस्तो अवस्थामा अन्य फिल्मबाट पनि अभिनयको लागि कत्तिको प्रस्ताव आइराखेका छन् ?
जवाफ: प्रस्ताव त पक्कै पनि आएको छ तर यो निर्णयको जिम्मा मेरो बाबा र मम्मिमा नै निर्भर रहन्छ ।खासगरी मेरो अध्ययनका लागि समय दिनु पर्छ। समयअनुसार निर्णयमा पुग्नु पर्छ।
(छोरीको प्रसङ्गमा मम्मि झरनाको जवाफ- प्रस्ताव त सुहानाको लागि २,३ ठाउँबाट आएको छ तर तत्कालनै अर्को फिल्ममा खेलाउने हाम्रो योजना छैन। अब केही समय उनीले अध्ययनमा समय दिने छिन् र अध्ययन पूरा गरेपछि उनी फेरि फिल्मनगरीमा फर्किने छिन्)
प्रश्न: तपाँईले फिल्ममा त अनमोल के सि हिरो पाउँनु भयो तर वास्तविक जीवनमा सपनाको राजकुमार कहिले घोषणा गर्ने?
जवाफ: चलचित्रमा पाए पनि वास्तविक जीवनमा पाएको छैन। पाएको भए सबैलाई खुलारुपले भनिदिन्थे।आमा -छोरी दुबैको हाँसो एकै छिन………….।
प्रश्न: तपाँई फिल्म नगरीमा प्रवेश गर्दा बढी प्रेरणा मम्मी को थियो कि बाबाको ?
जवाफ: पक्कै पनि प्रेरणा र हौसला त हुने भयो तर त्यति धेरै पटक फिल्ममा खेल्नु पर्छ भनेर मम्मी बाबाले भन्नु भएको पनि हैन। मम्मीको फिल्ममा ब्यस्तता देख्दा खासै यो क्षेत्रमा आउँने चाहना थिएन तर पछिल्लो पटक दुबैजनाबाट फिल्म खेल्नु पर्छ भन्ने प्रस्ताव आयो । त्यो कुरालाइ मैले स्विकार गरेको हुँ।
प्रश्न: तपाँईको त बजारमा अनमोल के सी संग विवाह हुने चर्चा चलेको थियो नि, के यो साँचो हो?
जवाफ: दर्शकहरुले फिल्ममा हाम्रो केमेस्ट्री मन पराइदिनु भएको हो । बजारमा कुरा आएजस्तो विवाह हुने भन्ने विषय केबल भ्रम मात्र हो। हामी यथार्थमा भन्दा फिल्मका पार्ट्नर मात्र हौ।
← पोल्यान्डबाट डा एलिनी पोखरेल सुबेदी ‘नेपाली संस्कृति तथा सद्भावना राजदूत’ को मानार्थ उपाधिले सम्मानित
यस्तो थियो २००८ सालमा अर्थमन्त्री सुवर्णले पेश गरेको त्यो बजेट →